China Type-C 15w isina waya HUB (12 mu1) vagadziri uye vatengesi |Wellink
Type-C 15w isina waya HUB (12 mu1)
Muenzaniso: OS- KZ002
15w isina waya yekuchaja;RJ45 Gigabit wired network;TF/SD inotsigira kuverenga panguva imwe chete yedata;PD3.0 kuisa;USB3.0 5Gbps pasekondi, kukurumidza-kumhanyisa data kutapurirana, inotsigira kubatanidza panguva imwe chete yemidziyo yakawanda;HDMI 4K HD;VGA 1080P;Audio 3.5 mm.
PD yekuchaja simba inosvika 87w;
Yese aluminium alloy shell material, inokurumidza kupisa kupisa.
HDMI, USB 3.0*4, gigabit network port, PD 3.0*2, SD/TF kadhi slot, 3.5mm odhiyo, VGA
(CN, US GB, AU) kureba 1.5M
2. tsigira 4k 60Hz kutapurirana kwevhidhiyo, E-Marker chip
3. tsigira PD100w yakakwira ikozvino kuchaja
• FAST CHARING AND DATA TRANSFER: Iine 3 ports ye USB 3.0 iyo inopa kukurumidza kutumira data kusvika ku5 Gbps.Iyo ine 4 ports ye USB 2.0 iyo inopa kusvika ku480 Mbps yekufambisa chiyero, uye inotsigira hukama hwakagadzikana nekhibhodi uye mbeva.Kuchaja laptop yako kusvika ku100W kuburikidza nePD port, kuchaja yako type-c zvishandiso kusvika ku18W kuburikidza nePD port.
• 15 IN 1 USB C ADAPTER: SciTech 15 mu 1 Adapter yakanakira Apple Macbook uye mamwe mhando C michina.Iine 4K@ 30Hz HDMI port, VGA port, wireless charger, SD/TF kadhi kuverenga, 3 USB 3.0 Ports, 4 USB 2.0, Type C PD yekuchaja chiteshi (chaja chete), 3.5mm audio jack uye Gigabit Ethernet. .Cherechedza: Audio jack haitsigire Mic.
• WIRELESS CHARGER & AUTO-ADJUSTING ETHERNET PORT : Mhando- C zvishongedzo zvakavakirwa-mukati yakakwidziridzwa chip, inopa kukurumidza kuchaja isina waya kumidziyo yako yese inotsigira kuchaja isina waya seAirPods Pro.Hazvina mhosva kuti internet yekumhanya yauinayo, RJ45 Port inozviziva uye inogadzirisa otomatiki kusvika padanho repamusoro.
• ULTRA HD 4K OUTPUT : Ratidza laptop yako ye-USB- C kana sikirini yefoni 4K HD kana vhidhiyo yakazara HD 1080P uchishandisa HDMI kana VGA port.Iyo compact ine nyore kubatana kuTV, monitors, uye purojekita yezviratidziro, kufona kwemusangano, imba yemitambo.Kana yangobatana neHDMI neVGA tambo panguva imwe chete, iyo yakanyanya resolution yechiratidziro chimwe nechimwe ichave 1080P@60Hz.Ongorora: iyo vhidhiyo inobuda inoda yako mudziyo mhando c port rutsigiro DP Alt Mode (Thunderbolt 3).
• 100% SATISFACTION GUARANTEED: kana iwe usingafari nekutenga kwako chero chikonzero, tapota taura nesu uye isu tichagadzirisa nyaya yako kune yako 100% kugutsikana.Tinogona kutsiva mudziyo kana kukupa mari yakazara yemutengo wako wekutenga.Hauna chaunorasikirwa nacho.
Mubvunzo:Izvi zvichashanda ne2020 apple ipad pro 12.9?
Mhinduro:EHE, Inogona kushandiswa neApple iPad 12.9 uchishandisa C interface.
Mubvunzo:Izvi zvichasimbisa mudziyo wawakabairwa here?
Mhinduro:Hongu izvi zvichasimbisa mudziyo wachakabatana nawo chero iine simba rakabatana ne USB C port.
Mubvunzo:Ndinowana sei simba kune izvi?
Mhinduro:Kana uri kubatanidza midziyo yakawandisa kuHUB iyi, unofanira kuisa HUB iyi simba zvakasiyana nemhando c charger uchishandisa interface inopihwa paHUB iyi.Kungobatanidza HUB pakombuta hakuchaja mudziyo uye imwe nguva, iyo HUB ichashanda nemazvo kana isina yakaparadzana mhando c magetsi akabatana kwairi.
Zvakapfuura: 65w gallium nitride adapta 12 mu1 Type-C dock(2 mu1)
Zvinotevera: 5 mu1 Type-C HUB,HDMI,USB3.0,TYPE-C PD100w